Izinto Zezesayensi Nezobuchwepheshe Ozokwenza Ku-Silicon Valley
I-united states California
Njengesikhungo somhlaba wonke emisha kanye nekhaya lomlando wekhompiyutha ne-silicon based based technology, iSilicon Valley ayinakho ukulahlekelwa izinto ezinomndeni ezizokwenza abantu abafuna ukufunda ngesayensi nobuchwepheshe. Nazi ezinye izinto zesayensi nezetekisi okufanele zenziwe eSilicon Valley.
I-Tech Museum ye-Innovation (i-201 South South Market St., iSan Jose)
I-Tech Museum eDowntown San Jose inikeza izandla ezibukisweni ngendima yobuchwepheshe kanye nemishando emiphakathini yethu.
Kukhona imibukiso kumakhompiyutha nakumlando we-tech, isayensi yemvelo, isimemezelo sokuzamazama komhlaba kanye nesimulator esesikhala esikuvumela ukuthi ufunde ukuthi uthanda ukuthinta kanjani i-NASA jetpack. I-museum ine-IMAX Dome Theatre ebonisa amafilimu athandwayo namadokhumenti ezemfundo. Inani lokungena lihluka. Amahora: Vula usuku lonke, ngo-10 ekuseni kuya ku-5: 00
I-History History Museum (1401 N. Shoreline Blvd., Mountain View)
I-Computer History Museum inikeza imibukiso ejulile emlandweni wekhompyutha kusuka ku-abacus yasendulo kuya emafonini namadivayisi smart yanamuhla. I-Museum inezinsimbi ezingaphezu kuka-1,100 zomlando, kufaka phakathi amanye amakhompyutha okuqala kusukela ngo-1940 no-1950. Ukungena kuhluka. Amahora: NgoLwesithathu, ngoLwesine, ngoMgqibelo, ngeSonto 10 ekuseni kuya ku-5: 00; NgoLwesihlanu ngo-10 ekuseni kuya ku-9 ntambama
Le nyuziyamu yenkampani inikeza izinyawo ezingu-10-skwele zezandla-embukisweni ebonisa indlela abacubungula ngayo ama-computer basebenza ngayo nokuthi baqhuba kanjani wonke amadivayisi ethu e-computing.
Ukwamukelwa: Kumahhala. Amahora: NgoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, 9 AM kuya ku-6 PM; NgoMgqibelo, ngo-10 ekuseni kuya ku-5 ntambama
I-NASA Ames Research Centre (uMoffett Field, California):
Isikhungo senkambu ye-NASA ye-Bay Area yasungulwa ngo-1939 njenge-laboratory yocwaningo lwezindiza futhi seyisebenze kakhulu emisebenzini eminingi ye-NASA yezesayensi namaphrojekthi.
Ngesikhathi isikhungo socwaningo ngokwazo singavulwa emphakathini, isikhungo se-NASA Ames Visitor sika sinikeza izinkambo ezizimele. Ukungena: Kumahhala. Amahora: ngoLwesibili kuze kube uLwesihlanu ngo-10 ekuseni kuya ku-4: 00; NgoMgqibelo / ngeSonto 12: 00 kuya ku-4: 00
Lick Observatory (7281 Mount Hamilton Rd, eNtaba Hamilton)
Lezintambo eziphezulu zezintaba (ezisungulwe ngo-1888) yi-laboratory yokuhlola ucwaningo yaseYunivesithi yaseCalifornia futhi inikeza isikhungo sendawo yezivakashi, isikhungo sesipho, nokubukwa okuphawulekayo kusuka kumamitha angu-4 200 phezu kweSanta Clara Valley. Izinkulumo zamahhala ngaphakathi kwedome ye-observatory zinikezwa ngehora lesehora. Ukungena: Kumahhala. Amahora: NgoLwesine ngeSonto, 12: 00 kuya ku-5: 00
I-Hiller Aviation Museum (601 Skyway Road, eSan Carlos)
I-Hiller Aviation Museum iyimyuziyamu yomlando wezindiza eyasungulwa ngumqambi wezindiza zezindiza, uStanley Hiller, Jr. I-museum inezindiza zempi ezingaphezu kuka-50 eziboniswayo nemiboniso emlandweni wendiza. Ukungena: Kuyashintsha. Amahora: Vula izinsuku ezingu-7 ngesonto, ngo-10 ekuseni kuya ku-5 ntambama
Vakashela i-Google, i-Facebook, i-Apple, nokunye okuningi: Amahhovisi amancane amakhulu e-tech anezitolo zenkampani, iminyuziyamu, noma amathuba okuba nesithombe esithintekayo kakhulu. Hlola lokhu okuthunyelwe: Indlunkulu ye-Tech ongayivakashela e-Silicon Valley kanye namathiphu wokuvakashela i-Googleplex, Indlunkulu ye-Google ku-Mountain View.
Vakashela izikhumbuzo zomlando we-Tech: I- Silicon Valley ingenawo ubuchwepheshe obuningi "bokuqala." Ungakwazi ukushayela i- "HP Garage," lapho abashicileli be-HP bakhela khona imikhiqizo yabo yokuqala kusukela ngo-1939 (indawo yokuhlala yangasese, 367 Addison Ave., Palo Alto ) kanye ne-IBM yocwaningo lwama-lab (San Jose) lapho kuqala khona i-hard drive yokuqala.
I-Movement Maker + Amasayithi: I-Bay Area igubha imishini emisha kanye nemiklomelo "inhlangano yokukhiqiza," idumisa abantu ababandakanya ubuciko, imiklamo, ubunjiniyela, amaphrojekthi wesayensi, noma abanomqondo ojwayelekile (DIY). Ngonyaka ngamunye, umkhosi we-Maker Faire eSan Mateo County udonsa izinkulungwane zabakhiqizi, abathintekayo, nabathandi be-DIY bokudala abaza ukubonisa ukudala kwabo. I-Downtown yaseSan Jose's Tech Shop iyi-workshop esekelwe ilunga lapho izivakashi zingasebenzisa amadivayisi aphezulu we-computing mechanical, isofthiwe yakamuva ye-tech kanye nesakhiwo, ama-printers e-3D, bese ubhalisa emakilasini efundisa yonke into DIY: kusuka ekuthungeni, ekwakheni, ekuklanyeleni izithombe (Usuku ukudlula kuyatholakala).
Ukufuna izinto zokwenza nabantwana eSilicon Valley? Hlola lokhu okuthunyelwe.
I-Big Bear Lake
Izizathu Ezivusa amadlingozi Ukuvakashela iKalifornia ngo-2016
I-Mono Lake i-Oddly Intshisekelo: Nansi isizathu Okufanele Uvakashe
I-Channel Islands National Park
Izindawo ezihamba phambili zokuhamba eCalifornia
Umhlahlandlela Owokugcina Wokuhlela Ukuhamba Kwamatende
Izindiza ezihlinzeka izinhlelo zokusebenza ze-Mobile
I-Europe Eningi Enchanting Fairytale Castles
Emifanekisweni: Izindawo Okuzovakashelwa Ngxenyeni YesiLatini
Izindawo ezihamba phambili ze-Kentucky: Izindawo ezihamba phambili zokuvakashela
Izesekeli zokuhamba zokuPakisha
Umhlahlandlela Wabafundi Wokuphila eNyuvesi YaseNew York
I-Texas Longhorns Ibhola: Umhlahlandlela Wokuhamba Womdlalo e-Austin
I-Illinois Water Parks
Ungafika kanjani ku-St Jean Pied de Port
Isiqondiso seKikilano Beach eVancouver, BC
5 Izindawo zokudla eduze kweMontreal Olympic Park
Izindawo ezingu-9 ezihamba phambili ze-Atlanta zika-2018
I-Montreal Tai Chi Amakilasi